जहाँ विमानस्थलको सुरक्षा जिम्मा रोबोटलाई दिइन्छ ...
scheduleबिहिवार मंसिर २६ गते, २०७६
विज्ञान / प्रविधि, विश्व, समाचार
जहाँ विमानस्थलको सुरक्षा जिम्मा रोबोटलाई दिइन्छ …
टोकियो, १६ जेठ । जापानको नारिता विमानस्थलमा सुरक्षाका लागि रोबोटको प्रयोग गरिने भएको छ । जापानको चिबा प्रिफेक्चरको छिमेकमा रहेको नारिता विमानस्थल मध्य टोकियोमा पर्दछ । यस विमानस्थलमा सुरक्षा प्रयोजनका लागि रोबोटको प्रयोग गरिने भएको अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।
यस प्रयोजनका लागि चार ओटा रोबोट परिचालन गरिने छ । स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएअनुसार ती रोबोट १.२० मीटर उचाईका छन् । ती रोबोटमा ३६० डिग्रीको हिसाबमा निगरानी गर्ने क्यामेरा जडान गरिने छ । ती क्यामेराले सुरक्षाको राम्रो निगरानी राख्ने बताइएको छ ।
रोबोटबाट सुरक्षा निगरानी बढाइने यस प्रणाली यही जुन ३ तारिखबाट शुरुआत गरिने उक्त विमानस्थल प्रशासनले बिहीबार विज्ञप्ति प्रकाशन गरी जानकारी दिएको हो ।
सन् २०२० मा जापानमा ओलम्पिक खेलकूद हुदैछ । त्यस समयमा निकै धेरै विदेशीहरुको आगमन हुने र सुरक्षाकर्मीरुको पनि आवश्यकता हुनेछ । त्यतिन्जेल पनि यस विमानस्थलमा रोबोटकै प्रयोग गरिने अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् । विमानस्थल प्रशासनले दिएको जानकारी अनुसार उक्त विमानस्थलको टर्मिनल १ मा दुई ओटा र टर्मिनल २ मा दुई ओटा रोबोटको जडान गरिने जनाइएको छ ।
जापानले कामदारहरुको संख्या कटौती गर्ने नीति लिइरहेको छ । जसका कारण यसअघि पनि जापानका विभिन्न क्षेत्रमा र विशेषगरी सामान ढुवानी र यातायातमा रोबोटको प्रयोग गरि सकिएको छ । यसरी कामदार कटौतीको जापानी नीतिलाई अहिलेको रोबोटले पनि प्रबद्र्धन गर्ने अनुमान गरिएको पनि एक समाचारमा जनाइएको छ । रासस/एएफपी
शनिको राशी परिवर्तन हुँदैछ, कसलाई कस्तो असर पर्ला ?
एक इन्जेक्सन जसले तपाईंलाई बाबु बन्न दिँदैन
रुसी फार्ममा दूध उत्पादन बढाउन गाईलाई भिआर लगाइयो
डरलाग्दो सपना देख्नुहुन्छ ? नआत्तिनुहोस्, वैज्ञानिक अनुसन्धानले यस्तो भन्छ
अन्तरिक्षमा नेपालले राख्न लागेको भू-उपग्रहप्रति लाओसको आपत्ति
यसकारण आज मनाइन्छ विश्व रेडियोग्राफी दिवस
रातको १० बजेदेखि बिहान ८ बजेसम्म अनलाइन खेल खेल्न नपाउने व्यवस्था गरिँदै !
१५ लाख वर्ष पुरानो हिउँको नमूनाबाट जलवायु परिवर्तनबारे अनुसन्धान !
जाजरकोटका सबै टावर निर्माण गर्ने सहमति
मुसालाई दिए कार चलाउने प्रशिक्षण, यस्तो पाइयो नतिजा
सार्वजनिक भयो ‘फुड डेलिभरी’ गर्ने ड्रोन, १८ मिनेटमा २० किमी उड्छ
राजनीति, विज्ञान / प्रविधि
ट्विटरले राजनीतिक विज्ञापनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने
भौतिक शास्त्रमा अर्को सफलता, युवा वैज्ञानिक कुँवरले पत्ता लगाए यस्तो समीकरण
अमेरिकी प्राविधिक कम्पनी सिथोसको आर्टिफिसयल इन्टिलिजेन्स सेवा नेपालमा पनि
सिथोसको आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स सेवा नेपालमा पनि
महावीर नेतृत्वको ‘राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र’को उद्घाटन
भीभो भी १७प्रो: स्मार्टफोन फोटोग्राफीको नयाँ उचाइ
यस वर्ष माइक्रोसफ्टका सिईओ नडेलाको तलब ६६ प्रतिशतले बढ्यो
ओलीले दिपशिखासँग जस्तै प्रचण्डले सूर्य थापासँग स्पष्टीकरण लिने हैसियत राख्छन् ?
साझापोस्ट टिप्पणी/काठमाडौं, २५ मंसिर । तत्कालीन माओवादी र एमालेमा रहँदा केपी ओली र प्रचण्डले एकअर्काविरुद्ध गरेका टिप्पणीहरु...
विहीबारको सार्वजनिक बिदा दुई समुदायलाई मात्र
काठमाडौं, २५ मंसिर । सरकारले बिहीबार सार्वजनिक बिदा दिएको छ तर, सरकारी सूचनाअनुसार उक्त बिदा नेवार र किराँती समुदायका लागि...
जापानीहरु सय वर्षसम्म बाँच्नुको रहस्यः यी ४ सुत्र जानी राखौं
काठमाडौं, २५ मंसिर । जापानीहरुको ‌औसत आयु विश्वमै निकै उच्च छ । जापानमा पुरुषको ‍औसत आयु ८१.२५ र महिलाको औसत आयु ८७.३२ छ । जापानको...
रात छिप्पिँदै गर्दा बाबुरामले किन सम्झिए प्रचण्ड ?
काठमाडौं, २५ मंसिर । कुनैबेला हातमा हात, काँधमा काँध मिलाएर जनयुद्धको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड-बाबुरामको जोडी अहिले विछोडको...
खामभित्र झण्डै ६० लाखको बोनस, खुसीले कर्मचारीका आँखा रसाए
एजेन्सी, २५ मंसिर । अमेरिकाको म्यारिल्याण्डस्थित एक रियल स्टेट कम्पनीले गत शनिबार विदाको दिन एउटा भव्य पार्टी आयोजना गरेको...
हुथी विद्रोहीले फेरि अर्को साउदी ड्रोन खसाले
एजेन्सी, २५ मंसिर । यमनमा सक्रिय हुथी विद्रोहीले साउदी अरबको एक जासुसी ड्रोन खसालेका छ्न् । हुथी विद्रोहीले मंगलबार दिउँसो...
सांसदमा निर्वाचित विद्यालाई संसद पस्न अवरोधक बन्यो धारा ८८
काठमाडौं, २५ मंसिर । गत उपनिर्वाचनबाट नेकपाकी नेतृ विद्या भण्डारी कास्की-२ बाट प्रतिनिधिसभाको सदस्यको पदमा निर्वाचित भइन्...
यसरी भयो महाराष्ट्र राजनीतिमा ठाकरे परिवारको उदय
साझापोष्ट/ काठमाडौं, २५ मंसीर । महाराष्ट्र – भारतको ठूलो, धनी र शक्तिशालीमध्ये एक प्रदेश । यसको राजधानी शहर मुम्बई विश्वकै...